Qala ingadi Amathuluzi engadini namathuluzi engadini metal detector
Okthoba 28, 2017
1 Iyini umtshina wensimbi?
2.1 Inqubo ye-PI
2.2 Isilinganiso samanje se-AC
3 Ukungafani kwezitho zensimbi
3.1 Amamodeli angabizi
3.2 Uhla lwamanani we-upscale
4 Izinzuzo ezibonakala ngokucacile
5.1 Ukuzingelwa kwengcebo emanzini nasemanzini
6 Umtshina wensimbi njengendlela yokuzilibazisa ezithakazelisayo nezihlukahlukene
7 Ukusetshenziswa okulungile kwamadivayisi wokusesha
9 Thenga kusukela ku-inthanethi noma kusayithi kumthengisi?
9.1 Thenga ku-esitolo esikhethekile
9.2 Ukuthenga ku-inthanethi
11 Kuphi ukufuna ingcebo?
Iyini umtshina wensimbi?
Igama ngokuyisisekelo lithi: elilodwa metal detector ikhombisa izinsimbi. metal detector Kunemiklamo ehlukene futhi ngezinhloso ezahlukene. Zisetshenziswa ukuthola izinsimbi noma izinto zensimbi. Abazingeli bemali, lezi ziyizinto imitshina ethandwa kakhulu. Banika amandla Landelela phansi insimbingisho noma ingcwatshwa ngaphansi komhlaba kuze kufike ku-50 cm. Ngeke mhlawumbe ingatholakali ngaphandle kwenjini yokusesha. Amaningi ala madivaysi akhombisa ngisho nezinhlobo zensimbi ezitholakalayo ukuze umbukeli owaziyo ngokushesha azi ukuthi ukuvulelwa kusemqoka ngempela.
ephathekayo metal detector ube nesibambo, phezulu kwesiphathi kanye ne Ukulawula noma ukubonisa iyunithi ahlale. Ngezansi ku-engeli ipulangwe ikhoyili enamathiselwe. Ngenxa yomumo oshintshiwe, i-coil ingasuswa emuva nangaphandle eduze komhlabathi. Ukuboniswa ngenaliti kubonisa ukuthi kukhona okutholiwe. Ngesikhathi esifanayo, isignali ezwakalayo nayo ingasuswa, okuvumela umsebenzisi ukuba agxile kakhulu kwimvelo yakhe futhi akudingeki ukuba aqaphele njalo ukubonisa. Ithembo ingahlukahluka kuye ngokuthi uhlobo lensimbi nobukhulu obutholakala. metal detector ingasebenza ngezindlela ezahlukene. Izindlela ezehlukene zisekelwe ku Amasu we-PI (inqubo yokufaka inkokhelo) noma ngokusemthethweni AC nesilinganiso.
Ngenxa yokuphuma kwe-pulse-like of currents magnetic pulses ezivuthayo zenziwa ngensimbi eqhubayo. I-probe isisekelo se-transmitter kanye nesamukeli ngesikhathi esifanayo, kodwa ayikwazi kokubili ngesikhathi esifanayo. Okokuqala, ithumela ama-magnetic pulses, bese ithola amagesi kagesi. Lokhu kwenzeka mayelana ne-600 - izikhathi ezingu-2.000 ngomzuzwana. Ama-pulse magnetic akhiqizwa yi-DC yamanje enamandla egeleza ekupheleni kwekhoyili ehlanganisiwe. Ukwenyuka kwezinto ezithwala izinsimbi kutholakala yi-probe. Ukwenyuswa kweprobethi kungase kube Khulisa ukujula kokusebenza, Isignali esitholiwe idliwe kusuka koyili kuze kube semitha. Okukhulu kunento yensimbi, i-rash emandla kakhulu. Ngokuklanywa kweprobefu, umkhiqizi unezinketho eziningana kwi-PI ezobuchwepheshe. Ngezinkulu metal detector vumela ungene hlola izindawo ezinkulu okwesikhashana.
Isilinganiso samanje se-AC
ngesikhathi metal detector, esekelwe ukulinganisa kwe-AC, isetshenziselwa esikhundleni se-DC AC. Kulokhu, akukho ukushintshana phakathi kokudluliselwa kanye nokwamukelwa, kodwa ukuphakama kwesimo nesigaba sesigaba kufakwa ngaphandle kokuphazanyiswa. Lokhu kuqhathanisa izinto kanye nobukhulu emhlabathini. Amadivaysi ohla lwamanani entengo angasikhathi sinye izinkinga zamaphini ahlukene ukumboza, okuholela emiphumeleni enembile futhi ebucayi.
Ukungafani kwezitho zensimbi
Okuthandwa kakhulu imitshina ngenye i-bandwidth enkulu, Bakhombisa iningi lezinsimbi ngaphansi koqweqwe lomhlabathi. Abaqalayo bavame ukungena ngokukhethekile ensimbi ethile ngakho-ke bayisebenzise imishini Allround, Kodwa-ke, ukungalungi kulawa madivaysi ukuthi ukuphakama komkhawulokuphezulu wabo kunciphisa ukuzwela kwabo. Ukujula kokusebenza kuphansi kunamadivaysi amancane omkhawulokudonsa. Lokhu kuvumela futhi a indawo yangempela enembile ngisho nezinto ezincane. Abanye abasebenzisi bavame ukufaka amathrekhi ahlukile. Ngakho-ke bayakwazi ukusebenzisa idivaysi yosesho olunzima endaweni enkulu futhi banqume isimo esiqondile ekutholeni ngedivayisi ezwelayo. Kukhona futhi metal detectorokuyinto ine probe engenamanzi. Ku-streams noma emifuleni bayathanda. abanye metal detector zahlelwa ngensimbi ethize. Yilokho, isibonelo Izinhloli zegolide.
Njengoba ngokuvamile, intengo inegalelo elikhulu kwikhwalithi nokusebenza. Esigabeni samanani eshibhile kakhulu metal detectorukuthi ifakwe i-Spartan. Okubalulekile kuyindlela yokubonisa, evame uklanyelwe njenge-pointer. Ikuvumela ukuba ucacise uhlobo lensimbi nobukhulu bezinto. Ngaphezu kwalokho, isikhundla esiqondile sento ngenaliti yesinaliti singanqunywa. Ngaphambi kokusetshenziswa, ukubonisa kumele kulinganiswe kuze kube zero ngamanani afanele okumele aboniswe. Futhi i-Euhlaziyi-analyzer (ubandlululo) ube khona. Ivumela ukuzivumelanisa nezimo zomhlabathi ezahlukene. Amadivaysi angabizi ngokuvamile avumela ukulawula ivolumu ye-generous signal generator. Ngakho ukusetshenziswa kwe metal detector akusho ukukhathala ngokomzimba, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ubude bedivaysi. Amadivaysi amafushane afaka abantu abade kakhulu ukuba babe khona lapho behlelwa khona lapho iprobhethi idluliselwa emhlabathini. Okungcono, kukhona namadivayisi emkhakheni wamanani ashibhile, okulinganiselwe hlela ngamunye ngobude ushiye. Enye inzuzo lapho i-coil yokusesha ingashintshwa khona. Isibonelo, ngekhoyili enkulu, indawo ingahle iskenwe. Noma yikuphi okutholakele kungabhalwa ukuze ukwazi ukunquma isikhundla namanye ama-coil kamuva. Abanye abakhiqizi banamakhoyili angaguquguquki ohlelweni lwabo noma bavumele ukusebenza kwamakhoyili avela kwabanye abakhiqizi. Isibonelo somtshina wensimbi ophansi kakhulu isibonelo Seben Allround Metal Detector ngoba ngaphansi kwe-40 €.
I-Seben Allround Metal Detector Metal Detector Indicator
I-original evela kuSeben: Umtshina wensimbi ovuthiwe futhi ophumelelayo
Ukubukwa kwesikhwama sokutholwa kwe-Acoustic ne-optical
Ukujula kwendawo: max. ukujula kokusesha kwe-60cm (izinto ezinkulu), izinhlamvu zemali kuze kufike ku-max. 15cm
Ikhebula: ngaphakathi (akukho ukukhwabanisa nokugqilaza)
I-"Seben Ultimate Focus" engenawo amanzi engenawo amanzi "search coil", amanzi angajulile asesha ukufika kwamanzi angu-25 cm
Uhla lwamanani we-upscale
Lawa madivayisi ngokuvamile ane-display ebonakalayo ye-LCD uma kuqhathaniswa nesiboniso se-analogue. Ngenye ukukhanyisa umsebenzi Lawa madivayisi nawo afanelekile Ubumnyama noma izimo zokukhanya eziphansi kangcono. Isibonisi sinika idatha enembile ngokuphathelene nento kanye nendawo yayo. Ngaphezu kwalokho, izitho zensimbi zekhwalithi ephakeme zivame ukuba nesinye Pinpointer, okunikeza imiphumela enembile nakakhulu. Ukukwazi ukuphazamiseka, isibonelo ezindaweni eziseduze nama-masts ocingweni, kufakwe ngcono nakakhulu kumadivayisi athile. Ukuqhathaniswa kwedatha yobuchwepheshe kunikeza ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusebenza. Njengomthetho, amadivayisi angcono nawo anayo ukujula kokusebenza okuphakeme. Esikhathini samanani entengo engenhla kungokwesibonelo Ukutholakala kwe-Bounty Hunter 3300 Metal Detector.
Ukutholakala kwe-Bounty Hunter Ukutholakala kwe-3300 Metal Detector Metal Detector nge-11 Ingxenye Yokukhomba Ukukhomba Okubalulekile
Umtshina wensimbi nge-7 segment aim compression kanye nezinhlobo ze-3 zokubandlululwa kwensimbi okuthuthukile. Izindlela zokucinga ezahlukahlukene kanye nempendulo yesiginali ye-4 inikezela imininingwane mayelana nokutholwa kwensimbi ekujuleni kuka-28 cm.
Uhlelo lokuqondisa ngezinombolo lusiza ekuboneni kwento futhi izinto ezingafuneki zifihlwe ngokucindezela inkinobho. Izibuko eziqondisiwe zinikeza imininingwane ngohlobo lokutholwayo kanye nokujula okukulo.
I-8 Custom Search Coil iyakwazi ukuguquguquka futhi ayikwazi ukungena emanzini. Umgodi obunjiwe okwenziwe i-ergonomically shaft, ne-S-Rod grip yenza kube lula ukubamba umtshina
Ubukhulu: 71,9x25,4x15,2 cm / Isisindo: 1,91 kg; Ukusebenza kudinga amabhethri we-2x 9V-block (akafakiwe)
Ububanzi bokulethwa: umtshina wensimbi; imiyalelo
Izinzuzo ezibonakala ngokucacile
a metal detector ibonisa izinsimbi ezifihliwe ngaphansi kwezinye izinto. Wonke umuntu uyazi abasizi abancane, abonisa amapayipi namapayipi ensimbi odongeni. Bakhombisa inkambo yangempela futhi ngaleyo ndlela bavimbele ukulimala okungenhloso ngamapayipi namapayipi, isibonelo lapho izimbobo kufanele ziboshwe odongeni. Esinye isibonelo sezitholampilo yiwo Metal imitshina iziphathimandla zokuphatha, isibonelo esikhumulweni sezindiza. Bazwa izikhali ezenziwe ngensimbi. Ukusetshenziswa kwezempi metal detector um Amaminithi, izinhlamvu, amabhomu noma amabhomu landela phansi emhlabathini. Okufanayo kusebenza nakanjani enkonzweni yokukhishwa kwe-ordnance service. Abazingeli bamagugu, yiqiniso, banenhloso ehluke kakhulu. Akuzona ngempela ukufuna ingcebo elahlekile, kodwa noma yini ebalulekile noma endala. I-jewelry ye-antique noma ithuluzi lingenalo inani eliphakeme lezinto ezibonakalayo, kodwa lingaluthola inzuzo enkulu. Ngezinye izikhathi, noma kunjalo, bathola nezinto eziwela emkhakheni we-ordnance imvume. Ikakhulukazi kusukela eMpini Yezwe II kutholakala njalo ezindaweni zokwakhiwa nasehlathini. Esimweni esinjalo kufanele ngokushesha kwaziswa iziphathimandla ezikhono kube.
Abanye abantu beza komunye oswele metal detector, Izinto ezilahlekile, njengezinto zokuhlobisa, amawashi noma izinkinobho zemoto zingase zibe nenani metal detector thola okuhle. Ebhishi esihlabathini noma ebuhlathini obude ukusesha ngaphandle kokusekelwa kwekhono lobuchwepheshe bekuyobe kuthathe isikhathi eside futhi abaningi banqamule amahora okucinga. Futhi, libiza ikakhulukazi emabhishi abavakashi abathile abazibiza ngokuthi "abazingeli bemali" kulolu hlelo, ethembeni, benomtshina ukulahlekelwa izinto eziyigugu ukuthola. Kungakhathaliseki ukuthi uphumelele yini ku "Finder othembekile", umbuzo ovulekile. Noma kunjalo, ibonisa ukusebenza kwe metal detector, Emasimweni wokwakha noma engadini yakho, leyo divayisi ingabuye ibe yimpahla. Uma inkambo yamapayipi yensimbi noma izintambo ezisemhlabathini engaziwa kahle, umtshina uvikela ukulimala komhlaba okubangelwa umonakalo wengozi. Elinye iqembu labasebenzisi abangabakhona besinye metal detector ukuhlinzeka abazingeli meteorite Ama-meteorite amaningi ashaya umhlaba anenhloko yensimbi. Lezi zivame ngamasentimitha ambalwa ngaphansi kwezingqimba zomgodi womhlaba futhi zilinde ukuthola. Abanye abantu baphumelela kangangokuthi bangaphila nokudayiswa kwamameteorite atholakele.
Njengomzingeli wezimpahla kufanele kucatshangelwe noma ngabe yikuphi, isimo samanje somthetho esitholayo. Lokhu kungahle kube yendawo ehluke kakhulu kwesifunda futhi kubangele izijeziso ezinzima zokuphulwa.
Ukuzingelwa kwengcebo emanzini nasemanzini
Kuzo zonke izinsimbi zensimbi, i-probe ayinamanzi. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwamaphethelo omfula nakho kulungile. Imifudlana kanye nezinkokhelo zabo ngokuvamile zivela ezintabeni. Ngakho umfula wuhlelo lokuthutha lwezinsimbi eziningi.Abanye abantu badonsa igolide emifuleni. a metal detector ikakhulu lapho befuna ezinkulu igolide zidwedwe kube usizo kakhulu. Kodwa futhi zemali zasendulo noma ezinye izinto zitholakale njalo emifuleni. Ngokuyinhloko bavela imikhumbi eyehlisiwe, Yiqiniso, lokhu kusebenza ikakhulukazi olwandle. Abazingeli bamagugu nabavubukuli basebenzisa futhi ngaphansi Ama-detectors ensimbi yamanzi, Ngokuvamile yizingonyana ezishisiwe, okuyizona zokuqala ezikhomba ukuwohloka komkhumbi. Zigcina amakhulu eminyaka futhi, ngenxa yobukhulu bayo nobuningi bensimbi, zinikeza ukuqhuma okuqinile kwesichazamazwi sezinga. Yiqiniso lezi zikhethekile metal detector for the ukusetshenziswa kwamanzi eklanyelwe.
Umtshina wensimbi njengendlela yokuzilibazisa ezithakazelisayo nezihlukahlukene
Kusuka kokubili metal detector kungaba ngokushesha ukuthakazelisa. Kwenza kube lula ukuthola izinto ezifihliwe. Iningi lalezi zinto kakade lidala kakhulu, ngakho-ke baye bangcwatshwa umhlaba ngokuhamba kwesikhathi. Ukubabuyisa emini futhi ukucabanga ngemvelaphi yabo sekuvele kuthinte abantu abaningi ukuzijabulisa okuthakazelisayo inikezwe. Kungaba futhi isikhathi esihle sokuzilibazisa amaqembu noma imindeni. Yiqiniso, abantu abaningana bangasebenzisa izimboni eziningi zensimbi ukuskena izindawo ezinkulu kakhulu ngesikhathi esisodwa, okuyinto ekhulisa izinkinga zokuthola umcebo. Okunye okuhlukile ukuthenga okuhlangene kwekhwalithi ephakeme kakhulu Metal umtshina. Ngakho izindleko zomuntu ngamunye aziphezulu kangaka futhi akudingeki ukuba uhlehlise ukusebenza nokukhwalithi. Kukhona nezinkundla eziningi ezibhekana nesihloko metal detector noma ukuzingelwa kwengcebo. Lapha ungakwazi ukushintshanisa ulwazi olubalulekile futhi kukhona amathiphu amaningi. Inkinga evamile inquma inani lokuthola. Izinto eziningi ezibonakala ziyigugu zibonakala zingenanzuzo. Ngakolunye uhlangothi, izinto ezibonakala zingenanzuzo zingabaluleka kakhulu kubavubukuli. Indawo kufanele iphawulwe ngokunembile ngangokunokwenzeka, njengoba kungenzeka kube khona omunye umangala ofihlekile, ngisho noma kungenziwa ngensimbi.
Ukusetshenziswa okulungile kwamadivayisi wokusesha
Njengawo wonke amadivayisi wezobuchwepheshe, kubalulekile ukujwayelana nayo ngaphambi kokuyisebenzisa okokuqala. Ngeze nje uzothola imibhalo yomkhiqizi emaphaketheni. Ku metal detector Kunconywa ukudala indawo yokuzijwayeza, uma kunokwenzeka endaweni yakho. Uma usesha ezweni lomuntu wesithathu, unayo imvume ebhaliwe evela kumnikazi. Kungcono ukuqala ngokufihla izinto ezihlukahlukene. Bamba izimbobo ezijulile. Ukukungcwaba usebenzisa insimbi engenalutho, kodwa futhi ubucwebe bangempela kanye nezinhlamvu zemali. Maka izindawo lapho "ingcebo" yakho ingaphansi komhlaba. Manje qala ukucinga futhi uqoqe okuhlangenwe nakho okubalulekile. Ngale ndlela, i ukusebenza futhi ukusebenza Khetha imodeli yakho kahle. Uyabona ukuthi ngabe usesho lwakho lengenamaphutsa isebenza. Lokhu kuhlanganisa umsebenzi obalulekile ukubandlulula, Okuhle, lokhu kuqinisekisa ukutholakala kwensimbi engenalutho emhlabathini. Thatha isikhathi sakho futhi uzibeke ngaphansi kwengcindezi. Umkhuba omncane uvumela ukusetshenziswa okuhle kwesinye Metal umtshina. Okungase kukuthole kumangale ngemva kokuthola izinto ozingcwatshele kuzo kuqala ukuthola emhlabathini wakho. Ngubani owaziyo, mhlawumbe uzothola ingcebo yangempela. Nokho, okokuqala thola mayelana ne izinhlinzeko zomthetho kanye nemingcele yokuzingelwa kwengcebo. Ngakho metal detector Ukuhamba ngokubheka umcebo endaweni enkulu kakhulu kuvunyelwe abantu ngabanye. Ukuthola okubalulekile akukho intela, kodwa kunemingcele okufanele icatshangelwe. Ngakho-ke, okutholakele okusemqoka kungadlulela esifundeni esiphezulu. Kusuka kumbuso kuya kwesimo sezwe lapha imithetho ehlukile ngaphambili.
Izingane akufanele zibukeke zingasetshenziswanga umtshina wensimbi. Ingozi yokuthola izinsalela zeMpi Yezwe Yesibili ehlathini noma emadlelweni inkulu kakhulu.
Thenga kusukela ku-inthanethi noma kusayithi kumthengisi?
Ufuna kuphi wena? metal detector Thenga? Ingabe usacubungula ukuthi ngabe ungubani noma umthengisi wendawo abathengisi Online ukuthengwa kwi-intanethi? Siyajabula ukukusiza ukuthi wenze lezi zinqumo ezibalulekile. Sebenzisa ulwazi lwethu ukuze ungakhathazeki ngokwenza isinqumo esingalungile. Zombili izinketho zinezinzuzo nezinkinga.
Thenga ku-esitolo esikhethekile
Ngemuva kwesinqumo esisodwa metal detector Abathengi abaningi bafuna umdayisi endaweni yabo ukuthenga. Ngokuqinisekile uzodingeka uqaphele, ngoba lo msebenzi wokuzilibazisa abazingeli kunzima ukuthola isitolo esihambelanayo. Isizathu salokhu ukuthi azikho izitolo ezikhethekile zalesi sikhangiso. Ngokuqinisekile uzothola lokho okufunayo ezitolo zangaphandle nezitolo zezikhali. Njengokufunwa kwe- imitshina Kulezi zitolo ezikhethekile kunalokho kungavamile, akufanele kulindeleke ukuthi kube nemingcele emikhulu kakhulu. Inzuzo eyodwa metal detector ukuze ukwazi ukuthatha nawe ngokuqondile, ihlushwa kakhulu ngokukhetha okuncane. Abaqondisi abaphethe babheka ukuhlanganisa okukhulu njengengozi engcupheni, ngoba ukufunwa kugcina kungapheli. Ngakho-ke kukhona amamodeli angaphezu komuntu ongenalwazi ozingela umcebo. Ngezinye izikhathi izisebenzi zokuthengisa ziphazamiseka iseluleko esiwusizo ngempela. Kwezinye izimo uzama ukuzithengisa ngokuzenzakalelayo amamodeli asekhona esitolo. Amanani avame ukuphakama kune-intanethi. Uma uthenga kusuka esitolo esithile, ungadinga ukuchitha isikhathi esiningi samahhala ekuthengeni. Ukufika lapho, ukuthola indawo yokupaka futhi ulinde ukubonisana kuthatha sonke isikhathi sakho nemali. Nazi izinzuzo zokuthenga ku-Inthanethi.
Ukuze uthole ukuthenga okukhululekile, i-Intanethi iyatholakala. Ngoxolo nokuthula, ungathenga futhi ukhokhele lokho okufunayo ekhaya. Abantu abasebenza ikakhulukazi bayakwazisa lokhu okunethezeka. Amahora okuvula ezitolo zenza ukuthengwa khona lapho kunamathuba amaningi okusebenza angenakwenzeka. Inzuzo yi-intanethi, ukukhethwa okunamandla kakhulu kwezitho zensimbi, ngokungafani nabadayisi. Konke okumele ukwenze ukukhetha imodeli ozikhethayo phakathi kwesixuku, futhi ukulindela kwakho kungavuka. Ezinye izitolo zihamba ngomkhumbi ngokushesha emva kwe-oda, ngisho nokuthumela okuthunyelwe. Uma imodeli engekho esitokisini, izoboniswa kuwe ngokushesha. Izintengo nazo zikhangayo kakhulu. a Metal Detector Bargains ingatholakala ngokuzikhandla. Enye inzuzo eqinisekisayo ukukhethwa kwezesekeli. Uthola amabhethri, ekhethekile tote Izikhwama futhi spool esitolo se-inthanethi se-the metal detector ngaphambili.
Qaphela ukuthengwa kokunikezwa kwamandla. Amadivayisi amaningi anikwe amandla amabhethri. Uma ishaja ingahlanganisiwe, kufanele ithengwe ngokwehlukana. Isikhathi sokusebenza sincike kumthamo webhethri kanye nokusebenzisa amandla komtshina wensimbi. Lokhu kufanele kucatshangelwe ekuthengeni. Ukuze usebenzise isikhathi eside, ibhethri elongeziwe lingase libe usizo.
Kuphi ukufuna ingcebo?
der metal detector Yiqiniso, ngokuhamba kwesikhathi, kumnandi uma omunye noma omunye umcebo utholakala ngempela. Kuphi okungekho muntu ongakutshela khona, kodwa izifunda ezithile nemisebenzi zithembise kakhulu kunezinye. Sithanda ukukugqugquzela ngemibono ethile lapho ungasesha khona Igugu detector ingaba yimpumelelo:
Ukusesha kuphumelele emasimini. Ukuthungwa lapha akuvumi kakhulu.
Phakathi kwezihlahla ezindala nezinkulu, okhokho bethu abaningi bathola indawo yokuphumula esikhathini esidlule
Emagcekeni empi yangaphambili amathuba okuthola athole kakhulu. AmaRoma athola nezinto ezivela ku-1. no-2. Impi Yezwe II ingenye yezinto ezivame kakhulu kulezi zindawo.
Ngaphansi kwamabhuloho amadala ungathola izinhlamvu zemali zamaRoma. AmaRoma ayema ​​lapha futhi anikeze amahhashi abo ngamanzi amasha.
Amanzi okugeza, amachibi kanye namabhishi yizinto zokuhlobisa nokutholakala kwemali.
Izinto zokubuka, izitshalo ezindala, ama-bog, ama-rock formations kanye nemifula nazo zinkulu ngokuzingelwa kwempumelelo ephumelelayo.
Qaphela izinqaba namanxiwa! Lapha ngokuvamile kuvunyelwe imvume.
Metal Detector INTEY Metal Metal Detector YONKE I-METAL Nokusebenza Kokubandlulula Imisebenzi Ephezulu Yezindlebe Zesiliva Sensimbi Yesiliva Kwabaqeqeshi nabaqalayo abanamabhakede okugcoba kanye ne-tote display
★ ZONKE IZIMALI & I-DISC: Lo mshini wensimbi unezindlela ezimbili ongakhetha kuzo. Ngemodi yensimbi yonke, umuntu angacinga zonke izinhlobo zensimbi ngebhalansi yomhlaba ezenzakalelayo. Ngomsebenzi wokukhipha (i-DISC) umuntu angahlukanisa insimbi, i-zinc, uhlamvu lwemali njll. Ngomtshina wensimbi ungazingela izinhlamvu zemali, izinsalela, ubucwebe, igolide nesiliva.
★ Ukuzwela okuphezulu: Umshini wensimbi we-INTEY uthola izinsimbi ezinjenge-iron, i-aluminium, itini, ithusi, isiliva negolide, kepha insimbi engasebenzi nensimbi ayenzi. ❤️Ukuqanjwa: Musa ukusebenzisa umtshina wensimbi ezakhiweni njengoba izinto zensimbi ezakhiweni ziphazamisa izimpawu ezijwayelekile
★ I-PINPOINTER: Bamba inkinobho yenkomba bese uhambisa umtshina kancane. Khipha inkinobho lapho uzwa umsindo. Ngemuva kwe-approx. 1 ~ 2 imizuzwana bamba futhi inkinobho ebomvu, ngasikhathi sinye ukugcina umtshina uphumule. Ngemuva kwalokho hambisa umtshina kancane futhi uzowuzwa umsindo futhi. Phinda lezi zinyathelo ezingenhla uze uthole lapho uya khona.
★ I-WATERPROOF: I-shaft eguqukayo kanye nekhoyili yokusesha ayitholakali amanzi. Ungayisebenzisa ukusesha izinto zensimbi ezilahlekile emanzini angajulile noma olwandle lolwandle. Kepha isibonisi kufanele sibe kude namanzi ukugwema ukulimala.
★ IVolumu nebhethri: Kukhona i-jack elalelwayo futhi ikunikeza ithuba lokufuna umcebo emigwaqweni enomsindo noma emabhishi, ngaphandle kokuphazanyiswa futhi ivolumu ingalungiswa. Lapho ibhethri liphansi, amalambu izinkomba ze-LOW BAT. Dinga amabhethri ayi-2 9V (angafakiwe kwiphakeji). Uma unemibuzo ngesikhathi sokufaka nokusebenzisa, sicela uxhumane nensizakalo yethu yamakhasimende.
I-Viewee Junior umtshina wensimbi ongenawo umshini onomshini wokusesha ongenawo amanzi & umtshina wokubonisa i-LCD metal isignali ye-Acoustic nebonwayo [ngefosholo] Isipho sesibonisi sezingane
★ Isipho esifanele izingane: Viewee lightweight iron detector inikeza ubuchwepheshe obusha nobukhethekile. Ngokufika komgangatho nokuzwela, umtshina wensimbi unganciphisa ukuphazamiseka kusuka kumandla kazibuthe kanye nezimbiwa, njll ngesikhathi sokutholwa. Ngomtshina wazo, izingane zingabuka izinhlamvu zemali, ubucwebe, igolide nesiliva noma kuphi.
★ Izinketho zokungcebeleka zemindeni: Ngesikhwama sokuphatha nenduku eguqukayo kusuka kumasentimitha angama-27.5 kuya ku-35.4, kulula ukuthwala umtshina wensimbi. IViewee Metal Detector inikezela imindeni isikhathi esiyingqayizivele sokuzilibazisa, ithola abazali bematasa nezingane bephuma ngomnyango ukuze baqale ukuzingela amagugu. Umsebenzi onqobayo wokunqoba wabazali nezingane.
★ Ikhoyili yokusesha engenamanzi: Lo mshini wensimbi ungasetshenziswa emanzini angajulile. Ngemuva kokusebenzisa i-coil yokusesha emanzini kasawoti, kufanele uhlambe ngamanzi amasha ukugwema ukuvela kwezingxenye zensimbi. (Ifosholo lifakwe emaphaketheni)
★ Isibonakaliso se-Acoustic nesibonakalayo: Lapho umtshina wensimbi ethola into enensimbi, ukukhanya okubomvu kwe-LED kuyakhanyisa, ngasikhathi sinye isibonisi ku-LCD ukubonisa ngethoni ye-alamu evela ku-Buzzer. Uma ibhethri liphansi, kukhona nesiginali esibonisweni.
★ Amanothi: Sincoma ukuthi usebenzise ibhethri le-alkaline le-9V. Uma unemibuzo ngesikhathi sokufaka nokusebenzisa, sicela uxhumane nensizakalo yethu yamakhasimende. Sizokunikeza imiyalo yokufaka nokusebenza.
I-Metal Detector TACKLIFE MMD02 High Sensitive Metal Detector Waterproof Search Coil IP66 80-105cm Height Adibleable Probe LCD Screen nge-Backlight Carrying Case 2x9V Battery Indicator
🎄 IMIVUZO YOKUGCINA - Kunezithonjana ezi-3 ezinhle ezishukumisayo zezinhlobo ezi-3 zensimbi: 1. Insimbi ecijile njengezipikili, isikulufa 2. Insimbi engaholi ngensizakalo ephansi isib. Amasongo, amagwebu 3. Insimbi engaholi ngokuhambisana okuphezulu okufana nethusi, isiliva nokunye. Fun for wena nezingane zakho
S UHLELO LOKUTHOLAKALA OKUFINYELEKILE & ISITOLO - Kunezinhlobo ezi-3 ezihlukile zezinhlobo ezi-3 zezinto zensimbi. 1. Insimbi ecijelako, ithoni ye-bass 2. Ayisiyensimbi edlulayo enomshini ophansi, midrange 3. Not iron ferrous with high conductor, high tone. Izimpawu zokusobala ezicacile nezihlekisayo
I-🎄ERGONOMIC NE-DETAILED DESIGN - Kukhona imichilo engashintshi ekubambeni ukukusiza ukuba ubambe ngokuqinile. Kukhona futhi i-jackphone enhloko engu-3.5mm. Ungawuzwa umsindo ngamakhanda wakhe futhi useshe umcebo noma izinto zensimbi ngaphandle kokuphazamisa abanye
🎄 I-IDC YOKUFUNDA KANYE NOKUFUNDA KWAMANZI - Ungalungisa kalula ukuqondiswa nendawo yesibuko sokuthola njengoba ufuna. Umtshina wensimbi angabheka emanzini angajulile ubucwebe obulahlekile noma izinto zensimbi. AMathiphu: Ukutholwa kwe-disc akuvimbeli amanzi, kepha izilawuli aziwona amanzi
Uhlu lwe-🎁PACKAGE LEMPELA NOKUFUNDA - 1x TackLIFE MMD02 insimbi yensimbi, ibheji engu-1x (enkulu, isebenzayo futhi imelana nokuvinjwa) Amabhethri we-2x TACKLIFE 9V, ibhuku elingu-1x lezilimi eziningi. ♥ Umtshina wensimbi ufanelekile kubaqalayo. Hhayi kubantu abadala kuphela, kepha futhi nethoyi elihle lezingane Siyajabula ukukusiza ♥
I-Metal Detectors Pinpointer - I-SUNPOW IP68 I-Waterproof ngokuphelele engu-360 ° Sesha i-Metal Detector ene-Belt Holster, Buzzer Tone Vibration Sound (Izinhlobo ezintathu), i-9V Battery ne-Velvet Pouch Kubandakanya Display
I-360 DEGREE ProBE NEZindlela ezintathu OKUFANELE ZENZIWE: Idizayini yomphenyi we-SUNPOW ironpopo 360 ° idlulisa uhla lokutholwa futhi inciphise ukulahleka kwelitshe. Izindlela ezintathu - Imodi yokudlidliza (ethule), imodi yokulalelisisa, imodi yokuguquguqula nokuguqulwa komsindo, zilungele indawo ethule, enomsindo, phansi kolwandle nezinye izindawo.
QAPHELA ISIVIVINYO SAMANZIPROOF: Noma yisiphi isimo sezulu, noma emvula, emachibini, emifuleni, emachibini nasezilwandle, ungafaka umtshina wensimbi emanzini ukuthola amagugu afihlwe ngaphansi kwamanzi, kuyilapho ezinye izinto eziningi ezihola zingangeni ngokuphelele Valela amanzi.
UKUTHOLAKALA KWESIQINISO SEZIMALI EZIJWAYELEKILE: Umtshina wensimbi ungakhomba into ngokushesha nangokunembile (kufika ku-11 cm)! Iyakwazi ukubona i-iron, i-aluminium, igolide, ithusi, isiliva nezinye izinto. Kukusiza ukufezekisa ukuma okuqondile, okulinganiselwe okuncane okungeke kutholwe yilabo abahloli bezinsimbi ezinkulu.
I-OPERATION eyodwa, ukuthinta nokukhanya: Ukusebenza kwenkinobho eyodwa kunika amandla ukuvula (i-LONG PRESS) nokushintshwa kwemodi (UNIQUE CLICK). Ukuphela kokufanele ukwenze ukucindezela inkinobho bese uqala ukuzingela! Ubude nesisindo somtshina wezinsimbi ezivela ePinpointer zingama-27 cm nama-340 g ngokulandelana. Isipho esifanele abantu abahlukahlukene abanjengezingane, amadoda kanye nabadala njengesipho sikaKhisimusi, isipho sosuku lokuzalwa, isipho sikaKhisimusi njll.
UMHLANGANO WOKUQHAWULA: Sinikeza iWARI YAKA 2 WARRANTY. Ukuthenga okungenazingozi ngokuphelele! Uma unezinkinga noma imibuzo, vele uxhumane nathi nge-Amazon. Sizokwenza konke okusemandleni ukukunikeza insizakalo yamakhasimende ephelele! Ububanzi bokulethwa: i-1x iron detector pin pointer, ibhethri le-1x 9V, i-1x ibhande le-holster, incwadi yomsebenzisi eyi-1x yesiNgisi.
Izithako ze-Metal - SUNPOW high-usahihi ocacile wezinsimbi zabantu abadala nezingane, isibonisi se-LCD sinokukhanya okuguqukayo, umsebenzi oqondile kanye nemodi ye-DisC, isibonisi se-coil esibonisa ukungaholi kwamanzi esilinganisweni esingu-25,4 cm
★ Imodi ye-DisC nokulalelwayo okuyingqayizivele: Umtshini wensimbi we-OT-MD03 angathola izinhlobo ezahlukene zezinto zensimbi ezinjengensimbi, i-aluminium, igolide, ithusi, isiliva nezinto zabo ngemodi EYONKE IMETHE. Ungahlukanisa uhlobo lwensimbi ngomsindo ocacile bese ungawunaki insimbi engenamsoco ngokulungisa ibanga le-DisC ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokutholwa. Amabhethri we-2 9V alkaline ayadingeka.
★ ibhokisi lokulawula le-LCD ★: Ukucisha ukukhanya kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla futhi kudlulisela phambili impilo yomkhiqizo. Isikrini esikhulu se-LCD sikhombisa kahle imodi, uzwela, isimo sebhethri, ivolumu nokujula kwelitshe. Ngokuqondile kunomshini wensimbi we-pointer.
★ Khomba Umsebenzi & Ukujula Okuphezulu ★: Ngemuva kokuqinisekisa ibanga eliqondiwe kwelitshe kuyo yonke imodi ye-METAL, ungasebenzisa umsebenzi we-P / P ukukhomba ilitshe. Izinga levolumu nesithonjana sokubonisa linganquma ukujula kwelitshe. Ubunzulu bokutholwa kwimodi ye-PINPOINT FUNCTION bufika ku-20 cm.
★ i-coil yokusesha engenamanzi engu-25.4 cm ★: 25.4 cm ikhoyili engangenisi manzi inemizwa ephakeme. Iziqu namapholi angenamanzi akuvumela ukuba ubone ngaphansi kwamanzi. Iphelele ngaphandle, njengasolwandle, umfudlana, igceke. (Qaphela: ibhokisi lokulawula aliyona amanzi).
★ ISIQINISEKISO ★: Sinikeza ISIMEMO SAMAHHALA NEMINYAKA EMI-2. Ngokuphelele akukho ukuthenga okuyingozi! Uma unezinkinga noma imibuzo, vele uxhumane nathi nge-Amazon. Sizozama konke okusemandleni ukukwanelisa! Uhlu lwephakheji: 1 x insimbi yokuthwebula, 1 x ifosholo, 1 x ibhukwana lomsebenzisi, 1 x icala elikhulu lokuphatha. I-headphone jack (3,5 mm) inika amandla ukuxhumana kwama-headphones (akufakiwe).
Metal umtshina isibonisi
ibona ukuba khona kwensimbi
kubonisa amandla kazibuthe
Umtshina wensimbi we-OMMO wabantu abadala / izingane, ngePinPoint, i-DisC kanye nokuzwela okulungisekayo, ukutholwa kwegolide ngesibonisi se-LCDs, ikhoyili yokusesha engenamanzi, enamahedfoni, ephethe icala, njll.
I-Genauigkeit Ukunemba okuphezulu nokuzwela okulungisekayo Uma ucindezela inkinobho yokukhomba, ibhokisi lokucinga lizoncipha, bathole iphuzu ngqo lapho kukhona khona umcebo, futhi ubonise ukujula okulinganayo. Idivayisi ikhipha ithoni eqhubekayo. I-coil yokusesha engu-25 cm ayivunyelwe manzi, ukuzwela kwayo kuyashintshwa
Izindlela ze-【zazo "zonke izinsimbi" kanye ne-DisC Ngaphezu kwesithombe esibonisa, ithoni esetshenziswayo yinsimbi ehlukile iyahlukahluka. Kwindlela ye-DISC ungakhetha izinketho ezihlukile bese ukhipha izinsimbi eziyisisekelo. Ngakho-ke ungakwazi ukuzingela izinhlamvu zemali, izindandatho ezilahlekile, nesiliva negolide
Handle Isibambo esiguquguqukayo eside, i-coil engafunwa amanzi】 Isibambo singashintshwa sisuswe ku-76 cm siye ku-104 cm futhi ngaleyo ndlela sikunikeze ukuma okuntofontofo kokusebenza, noma ngabe umkhulu kangakanani. Abantu abadala nezingane bangasebenzisa kalula umtshina wensimbi. Isibambo nekhoyili yokusesha ayitholakali amanzi, ngakho-ke futhi ungasesha izinto ezilahlekile olwandle, ngemifudlana noma echibini. Sicela wazi ukuthi isibonisi akuyona into engamanzi
【Ama-headphones kanye nevolumu eguqukayo】 Umtshina wensimbi une-jackbu yomsindo engu-3,5 mm yama-plug we-headphone jack. Amakhanda afakiwe. Ama-headphone omakhalekhukhwini nawo ayahambelana nalapha. Ngenxa yamahedfoni, ungaya ekuzingeleni umcebo ezindaweni ezinomsindo - emgwaqweni ophithizelayo noma emabhishi aphithizelayo. Ngale ndlela uhlala ungaphazamisekile futhi ungagxila ekusesheni kwakho. Ivolumu iyaguquguquka
Device Idivaysi evumelana nomsebenzisi】 Umtshina wensimbi ungasindi, kulula ukubuthana, futhi ukwakheka okungafani nalutho kwe-armrest ngeke kukukhathalele ngisho nangemva kokusebenzisa isikhathi eside. Ngokulawula okusebenziseka kalula nenkomba yezinga lebhethri. Isikhala sokugoqwa sifakwa kanye nama-headphones, ibhethri elifanele le-9V kanye necala lokuphatha. Jabulela isikhathi uwedwa noma nomndeni wakho!
I-ADVENTURE HUNTING HUNTING: Ulwazi lwekhompiyutha nesiqondisi sokusesha nge-sensor sensors visual
I-Black Snake® Multi Pack Women Men Outdoor Bag Backpack Fanny Pack Waist Pack - Mnyama
Ilungele ukukanisa, ukuhamba, ukugibela, ukuhamba izintaba noma ukugibela izintaba, lesi sikhwama semini esincane esiningi sinikeza isikhala esiningi sokugcina
Imichilo ehlengekayo enokuvalwa okusheshayo okukhishwa yenza kube kufanelekile ukusetshenziswa njengesikhwama sehlombe noma isikhwama somlenze
Isikhwama esisebenzayo sibuye sisetshenziselwe ezemidlalo ejimini, paintball, ngesithuthuthu noma ngesithuthuthu
Amakamelo angu-7 ane-zipper noma i-Velcro esisheshayo esikhwameni sesithwali aqinisekisa ukugcinwa okulungile kwezinsiza nemishini
Kutholakala ngombala omnyama noma we-coyote, i-backpack nayo ilungele ukuzingela, ukudlala i-airsoft nasekuhambeni okusinda
I-DMAX Treasure Hunt yama-Real Guys: Umhlahlandlela Wokugcina ngu-Andreas Paul Kaiser noJürgen ProskeAnzeige
Umhlahlandlela wokugcina ovela ku-Andreas Paul Kaiser noJürgen Proske Ulwazi lokuthembisa izindawo ezisebenza ngokulungile
Ngubani ongaphuphi ukuthola umcebo? Ngokuya kwezibalo zesayensi, amathani ezinkulungwane ezinsimbi eziyigugu afihlwe emhlabathini waseJalimane kuphela
Le ncwadi ayidluliseli lonke ulwazi oludingekayo ngezindawo ezethembisayo, ukukhethwa kanye nokusebenza okuyikho kokuthola izinsimbi zensimbi neminye imishini njengoba kudingeka, kodwa futhi nokuthi yini okufanele uyenze lapho uthola "umcebo"
Izeluleko zegolide ezingokoqobo kanye nezindaba ezihlekisayo nezithokozisayo ezivela empilweni yokuzingela amagugu zizungeze ivolumu
Amakhasi we-256 - 27.09.2018 (Usuku lokukhipha) - pietsch (Umhleli)
Isilinganiselwa: 3.0/ 5. Kusuka kumavoti angu-3.
Isihloko sangaphambiliniI-Roomba 980 ngu-iRobot
Isihloko esilandelayoayina esiteshini